Xadhigjiidka Axsaabta Xuquuqbaa ku Lumeysa(1) Dr.Elmi M.Nur « SAWNEWS NETWORK
« “Guddoomiyaha UCID Wuxuu Doonayaa Inuu Hargaysa Khad Cas iyo Qabyaalad ku Kala Qaybiyo, Waana Dambiile Qaran” Md. Cismaan Cabdilaahi Cigaal (Cismaan Hindi).
WAA MAXAY IFILADA DOOFAARKU SIDEE AYAYNA UGA DUWAN TAHAY IFILADA CAADIGA AH? »
Xadhigjiidka Axsaabta Xuquuqbaa ku Lumeysa(1) Dr.Elmi M.Nur
Marxaladaha siyaasadda Somaliland ee socod baradka ahi waxaad mooddaa maanta iney madaxa ku hirdidey mawjado ay adag tahey in la saadaaliyo raadka ay kaga tegayaan qarankan curdinka ah.
Xaaladaha sii murgaya iyo wakhtiga xasaasiga is gurayaa waxay u muuqdaan kuwo geeddi socodkii ummaddan ee wali martida ka ah nidaamka adduunka, ku hagaayaan marxalad aysan furdaaminteedu sahlanaan doonin.
Halkan lagumasoo koobi karo qaddiyadaha murugsan ee ka dhashey siyaasadda ku qotonta xafiiltanka, nin tooxsiga, car iyo wirta ee baryahani calaamadda u nuqdey golayaasha Somaaliland iyo saameyntooda nolosha dadweynaha. Waxaase hubaal ah halista ugu weyn ee soo wajahdey masiirka ummadda iyo nidaam dawladnimo oo ka hana qaada dalku tahey go’aannada xikmadda ka madhan iyo adeegsiga awoodaha aan xeer dabra laheyn ee la isu adeegsanayo.
Marka laga gudbo xadhijiidka iyo buuqa iyo muranka ka aloosan golayaashan xiiqsan una degto nuxurka xaqiiqada qaddiyadda waxaa kuu soo baxaya inuu dhinackastiba doonayo inuu qiiqa ku qariyo guuldarrada ay kasoo hooyeen waajibaadkii saarnaa. Haddaba inigoo isu dayaya inaan mid mid usoo qaato waxaan maanta wax yar ka bidhaamin doonaa halka sartu ka qudhuntey waa guddiga doorashooyinka qaranka ee lagu guuldarreystey iyo kadeedka ay abuureen.
Guddiga Doorashooyinka Qaranka GDQ.
Doorashadu waa mashruuc baaxad leh waa marxalad halis badan, waa xilliga ummadi ammaba waddan si kasta oo uu biseyl siyaasadeed, xasiloonaan iyo dawlad wanaag ugu naaloodo uu ugu nugeyl badan yahey. Waa marxalad uu qaranku ruqaansadey una dhaxeeyo inuu hore u guuro iyo inuu gadaal u dheelliyo oo guuldarro aan laga soo waaqsan karin galo. Waa xilli xamaasaadda iyo baratanka axsaabtu haddaan xilkasnimo lagu maareyn, uu si toos ah ammaba si dadban uu qaarkood ula gali karo dano liddi ku ah masiirka ummadda. Sidaa darteed waxaa lagama maarmaan aheyd in cidda loo caleema saarayo iney maraxaladdaa halista badan ka tallaabiso qaran aan tiir adag ku joogin adduunkana hiil taageero ka haysan, aad loo qiimeeyo. Waxaa loo baahnaa in kooxda hawshan gadhwadeenka ka noqonaya la hubiyo iney noqdaan kuwo lagu aammini karo masuuliyadda mugga weyn leh. Ma aha in lagu qiimeeyo iney da’ahaan iyo daacadnimo buuxiyeen shuruudda, balse waa iney noqdaan kuwo ku guuleysta xulkii qaranka ee xilkan xajmigiisa iyo walwalkiisa leh. Taasi waajibaad culus ayey saareysaa golayaasha soo magacaaba xubnaha komishanka iyo wakiilladaba iney hubiyaan lahaanshaha aqoonteeda, waayo aragnimadeeda, miisaankeeda garsoorrsoornimo caddaalad leh, hufnaan, wadashaqeyn (teamwork) iyo farsamo maamul oo aad u sarreysa.
Marka arrimahaas lagu saleynayo abaabulka guddigani, ummadda iyo golayaashuna gaadh ka hayaan ee ay si joogta ah ugu kuurgalayaan halka ay dalka ku hagayaan iyo qaabka ay u gudanayaan waajibka qarada leh ee saaran, waxaa sahlanaaneysa in qiimeyn joogta ah lagu sameeyo, taasi oo ay ku kasban karaan kalsoonida ummadda iyo asxaabta loolameysa intaba ammaba ay ku luminayaan. Laakiin marka muhimmaddani noqoto mid lagu bixiyo shaqaaleysiin iyo shakhis jaceyl iyo dano siyaasadeed oo gaar ah waxaa ku lumaya danta guud iyo xuquuqda masiiriga ee ummadda, waana ta horseeddey xaaladdan cakiran ee maanta inna hortaalla.
Marka loo yimaaddo hirdanka axsaabta iyo golyaasha qaranka ee ka aloosmey diiwaan gelinta waxaa marka hore masuuliyaddeeda qaadaya GDQ oo si isdaba joog ah oo xilkasdarro ka muuqato ugu fashilmey iney fahmaan (is kadaa iney gutaan eh) masuuliyadda saaran, ilaa haddana ay ka lunsantahey, iney abuuraan isu kalsooni dhexdooda ah (ka sokow mid qaran). Waxey ku guul darreysteen iney go’aan mid ah soo saaraan oo xaqiiqada ku qotoma, iney hubaal ka yeelaan qorshihii iyo agabkii ay doorasho xor ah oo xalaal ah ku qaban lahaayeen muddada gaaban ee ka dhiman. Marka habdhaqankoodii muddadaas ay jireen dib loo jalleeco, ma muuqanayo waxaan ka aheyn, go,aanno qabyo ah, natiijooyin is burinaya, hubsiimo la’aan, khilaaf joogta ah, dayac xogtii ummadda, , qiyaasxumo aaney xaddidi karin waajibka sugaya iyo qorshe la’aan hawlaha muddeysan ee sugaya. Go’aanka guddoonka GDQ ay ku laaleen natiijadii diiwaangelinta iyo eedda ay usoo jeedinayaan Interpeace ma noqoneyso mid ka dhaqeysa guuldarrooyinka taxanaha ah ay ka soo hooyeen wajigii koowaad ee xilka loo igmadey. Mas’uuliyaddarrada ay muujiyeen ayaa keentey in Interpeace isa siiso awood ayna mudneyn iyo iney hay’addani xurmeyn weydo xeerarka dalka ay martida u tahey.
Marka hawshan dib loo eego qaladka ugu weyni wuxuu kasoo unkamey markii waajibaadkii ay laheyd wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose oo ah bixinta jinsidda muwaaddinka oo ka horreyn lahadyd diiwaan gelinta dusha laga saarey GDQ ka. Laakiin haddii duruufaha dhaqaale iyo wakhtigu khasbeen in hawshan la isu daro, waxey ku habbooneyd in fulinteeda guddi gaara iyo dawladaha hoose loo saaro. Markaa doorka GDQku wuxuu ku koobnaan lahaa hubinta in natiijada soo baxdey doorasho lagu geli karo iyo in kale. Waayo masuuliyadda aassaasiga ah ee GDQ waxey aheyd iney doorashooyin ku qabtaan wakhtigii loo muddeeyey, xaqna u laheyn iney iyago wax ka beddelaan. Farsamo ahaan iyo sharci ahaanba ma habbooneyn iney GDQ dhalashada jinsiyadda bixiyaan. Xaaladda habqanka ee murugsani waa mid haddii laga gudbo mudan in waxbadan laga barto. GDQku wuxuu noqdey kuwii hawshan diiwaan gelinta iyo jinsiyadda fuliyey isla markaana fashilkeeda ka marakacey, taasi oo keentey iney waxbadan xeerar badani is hirdiyaan, madaxana isugu dhufataan dhinacayadii ay dartood guddigani u dhaarteen iney ugu yaraan kala dhowraan haddeysan isu soo dhaweeyn karin.
Haddaba xadhigjiidka golayaasha iyo jahawareerka siyaasdeed ee arrintan murugsan ka dhashey iyo xaaladda aan ka soo rayneyn ee komishanku waxey walaac xoog leh ku abuureysaa qofkasta oo dhab ula socda waaqica taagan, qiimeynna kara, natiijada laga sugi karo, geeddiga habeenaad ee guddigani ku yabooheen iney, mar kale gaadiid la’aan, raraan qarankan socod baradka ah. Xaqiiqada inna hor taalla waxey tilmaameysaa, haddii aan xal wadajir ah degdeg loogu hawlgalin; karti xumada komishanka, kalsoonida luntey iyo sida muuqata kaalmo la’aanta beesha caalamka waxey bidhaamineysaa kadeed hor leh oo aan la saadaalinkarin halka uu saldhigan doono iyo saameynta uu reebi doono.
Haddaba si looga gudbo moronkan daba dheeraaday oo galey wajiga xasaasiga, waxaa lama huraan ah inaanan hirdanka xisbiyada lagu hilmaamin waaqica cusub mashaqadani ka abuurmey:
Ma muuqato rajo iyo kalsooni dhiman in GDQku gudan karaan waajibaadka farsamada iyo wadashaqeynta ay u baahan tahey doorasho xor ah oo xalaal ah ammaba ku sixi karaan qaladaadka qarada le hey galeen, qarankanna kaga sabata bixin karaan khatarta uu ficilkoodu horseedey.
Diiwaan gelintu waa mashruuc qaran, wakhti, maal iyo maskax badanina gashey hase ahaatee shaki kuma jiro iney farsamo xumo, takrifal iyo xil gudasho la’aan ka timid guddiga doorashadu owgeed uga leexatey hadafkii dartii loogu badheedhey.
Natiijada diiwaan gelintu sidaan ognahey waxey soo saartey muuqaal foolxun oo ah iney, si ogaal ah, ummadda badhna gabi ahaanba jiritaankooda is waayaan, la iskana hortaago xaqa doorasho ee codkooda, badh kalena qofkiiba toban iyo in kabadan kaga qayb galaan doorashada, taasi oo gabi ahaanba baal marsan hadafkii iyo caddaaladdii laga lahaa diiwaan gelinta.
Caddaalad darradan aan hadda maaro loo hayn intaan doorashaba la gaadhini, waa mid mustaxiil ka dhigeysa in lagaga gar niqi karo sanduuqa doorashada iyo natiijada ka soo baxda, iyadoo codkastaa ku qiimeysan yahey halka uu gaadhsiin karo masharaxiisa, oo ah kursiga uu sarreeya talada dalka.
Haddaba aniga aragtideyda shakhsiga ah marxaladdan kala guurka ahi waxey khasbeysaa in goloyaasha qaranku ka gudbaan nin tooxsiga iyo ficiltanka iyagoo u tudhaya shacabkan go’doonka ah, gartaanna in mustaqbalka ummaddu ku xidhan yahey Ilaahey ka sokow kartida, xikmadda iyo hab dhaqanka goloyaasha qaranka iyo hoggaanada asxaabta. Sidaa darteed waxaan soo jeedinayaa:
In GDQ (marka laga reebo labada xubnood ee cusub) sida ugu dhakhso badan iyagoo u tudhaya shacabkooda eegayana xaaladda khatarta ee ay sabab u noqdeen, midkalena u baajiyaan, is casilaan ammaba wada jir looga codsado iney banneeyaan iyagoo sharaftooda leh kuna ixtiraaman.
In golayaasha dalka iyo xisbiyadu si degdeg ah u magaacaabaan xubno karti, aqoon iyo hufnaan leh oo buuxiya kaalintan qabtana doorashada madaxweynaha diiwaan gelin la’aan, si or ah oo xalaal ah.
In la abuuro guddi qaran oo kala shaandheeya diiwaan gelinta iyo bixinta jinsiyadda, wixii ka dhimanna dhammeystira, iyadoo lala kaashanayo hay’adaha ay khuseyso iyo saaxiibbada Soomaliland.
In natiijada diiwaangelinta oo hufan lagu dhaqmo doorashooyinka danbe laga bilaabo doorashooyinka dawaladaha hoose ee soo socota si tajribada ka soo baxda looga faa’iideysto wakhti ku filanna loogu helo sixidda iyo horumarinteeda.
Ugu dambeyntii waxaan golayaasha dalka u soo jeedinayaa iney fahmaan in go’aannada taabanaya masiirka ummadda aanan lagu qaadan xaalad caadifad iyo rag iska celini ku dheehan tahey, waa in caqliga iyo xikmaddu shaqeyso, waa in xaalad kasta wada tashi isku tanaasul lala yimaaddo, iyadoo ay lagama maarmaan tahey in qaraarada lagu saleeyo xaqiiqooyin si cilmiyeysan ah loo daraaseeyey loogana baaraan degey natiijada ka dhalaneysa, iyadoo la xeerinayo danta guud, himilada iyo wadajirka ummadda.
This entry was posted on August 15, 2009 at 9:58 pm	and is filed under Articals. Tagged: Articals, Somaliland. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.